Daawo Malaaq Ibraahim Laysamow oo karbaashay Shariif Xasan oo uu sheegay in lagu khasaaray. | Arlaadi Online
Home Blog Daawo Malaaq Ibraahim Laysamow oo karbaashay Shariif Xasan oo uu sheegay in lagu khasaaray.
Daawo Malaaq Ibraahim Laysamow oo karbaashay Shariif Xasan oo uu sheegay in lagu khasaaray.
Malaaq ibraahim Macalin Cali (Malaaq laysamow) oo ka mid ah Malaaqyada misaanka ku leh Koonfur galbeed horana u taageersanaa Shariif Xasan ayaa yiri “Doorashadii shariif Xasan Sh. Aadan waan ku khasaarnay waxaan u baahanahay hoggaan wanaagsan oo ummadda samatabixiya”.
Su’aal ay shacab badan jawaabteeda sugayeen ayuu wariyuhu weeydiiyay Malaaqa inta u dhaxeeysa daqiiqada 17-aad ilaa daqiiqada 20-aad oo ah dhamaadka wareysiga su’aasha oo ahayd.
Marwalba waxaad maqlaysaa waxaa lasoo qabtay 5 dhalinyaro ah ama lix dhalinyaro ah iyo ka badan oo kasoo jeeda Koonfur galbeed iyaga oo qarax abaabulaya amaba shacab Soomaaliyed dilay oo qarxiyay in badana waa la toogtay, maxaad uga Adkaan weyseen dhalinyaradiina oo u badbaadin la’adihiin caruurtiina ummaddana u nabadgalin la’dihiin?
Malaaq Laysamow ayaa ku jawaabay waxaan la’nahay hoggaamiye wanaagsan, taariikhda Koonfur galbeed majiro hoggaamiye wanaagsan oo ka horeeyay ama ka dambeeyay oo la mid ah Shaatigaduud AUN oo ahaa nin ka fakarayey danta ummadda, Midnimadeeda iyo horumarkeeda. Xalku waa inaan helno hoggamiye sida Shaatigaduud oo kale ah oo ka shaqeeya danta ummadda iyo horumarkeeda oo ah sida kaliya ee shacabkaan lagu samatabixin karo dhibka jirana looga saari karo dhalinyarada iyo guud ahaan ummadda Koonfur galbeed.
Maamulka Shariif Xasan ayaa si ba’an ugu fashilmay hoggaminta Shacabka Koonfur galbeed fashilkaas oo ay ka faaideysteen kooxda Alshabaab oo gacanta ku dhigay dhalinyardii deegaanka kana dhigtay Koonfur galbeed saldhiga iyo xaruunta ay kasoo abaabulaan qaraxyada ka dhaca dalka oo dhan gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Xamar iyo degaanada Puntland.
Ka xoreynta Shariif Xasan reer Koonfur galbeed oo uu taladooda ku raagay waa arin u baahan inaysan Soomaali oo dhan u kala harin Maadaama dhibka ka imaanaya Hoggaan xumada Maamulka Shariif Xasan aysan ku koobnayn oo kaliya Koonfur galbeed balse ay gaaratay Xamar ilaa Bariga fog ee Soomaaliya magaalada Boosaaso. Halkaan ka daawo wareysiga Malaaq Laysamow.